आक्रा’मक ढंगले अघि बढ्दै ओली, एमाले लाई पहिलो बनाउने यस्ता छन चुनावि एजेन्डा !
काठमाडौं : नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आ’क्रामक ढंगले अगाडि बढ्ने भएका छन् । उनी पार्टीका कुनैपनि गतिविधि नरोक्ने गरी संगठनमा पकड बढाउँदै बढ्न लागेका हुन् ।
ओलीले माधव नेपाल पक्षका कसैलाई कारबाही पनि नगर्ने तर पार्टीमा पकड बढाउने गरी निर्णयहरु गर्दै जाने भएका छन् । यही रणनीतिका साथ उनी माधव नेपाल पक्षलाई पाखा लगाउँदै जाने रणनीतिमा पुगेका छन् । एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पनि ओलीसँग एउटै पार्टीमा रहन नसकिने निष्कर्षमा पुगिसकेको बुझिएको छ ।
ओलीले संगठनमा पकड बलियो बनाइसकेकाले त्यहाँ उनी निकै कमजोर भइसकेका छन् ।.अर्कोतर्फ, दोस्रो तहका हस्तीहरुले पनि साथ दिइरहेका छैनन् । उनीहरु मध्यमार्गी भन्दै पार्टी एकताको पक्षमा लागेका छन् ।
एमालेको नवौं महाधिवेशनको निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीमा बहुमत बनाएर ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाउने नेपालको रणनीति पनि सफल हुने देखिएन । ४० प्रतिशतभन्दा कम केन्द्रीय सदस्य मात्र पक्षमा देखिए । सांसदहरु पनि ३० भन्दा कम मात्र साथमा आउने देखियो । त्यसकारण पनि नेपाल आफ्नै बाटोमा अगाडि बढ्ने भएका छन् ।
कुनैपनि बेला नयाँ दल दर्ता गर्ने गरी नेपाल पक्षले केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरुको हस्ताक्षर संकलन गरेर राखिसकेको छ ।विश्वस्त स्रोतका अनुसार नेता नेपालले चाँडै पार्टीको वार कि पारको निर्णय लिने भएका छन् ।
ओलीले गर्लान त संघीयता खारेजी !
फुटको संघारमा रहेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीनिकट नेताहरुले एकपछि अर्को गर्दै संघीयता र धर्मनिरपेक्षतामाथि प्रश्न उठाइरहेका छन्।
अध्यक्ष ओली नै बेलाबेलामा धार्मिक विषयमा टिप्पणी गर्दै राजनीति र समाजलाई ध्रुवीकरण गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। त्यसैले आगामी दिनमा एमालेको राजनीतिक एजेन्डा के होला भन्ने चासो देखिन थालेको छ।
कतिपयले ओलीले संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको खारेजीलाई चुनावी एजेन्डा बनाउने आकलन समेत गर्न थालेका छन्। तर, ओली समूहभित्र यस विषयमा मत विभाजित छ।
ओली खेमाका केही नेताले संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको विषयमा समीक्षा हुनुपर्ने तर्क गरिरहँदा अन्यले भने यी विषयमा बहस हुनै नसक्ने बताएका छन्। गतमहिना बालुवाटारमा बसेको नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा महेश बस्नेतले संघीयता र धर्मनिरपेक्षताबारे समीक्षा हुनुपर्ने प्रस्ताव पेस गरे।
उनको भनाइ विवादित बनेपछि बस्नेतले अध्यक्ष ओलीको राय, सल्लाह र सुझावमा सो प्रस्ताव नआएको दाबी गरेका थिए। तर, ओलीको ‘ग्रिन सिग्नल’ बिना संविधानसँग बाझिने महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दामा बस्नेत एक्लैले प्रस्ताव ल्याउन नसक्ने धेरैको बुझाइ छ।
बैठकमा एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीले पार्टीको नीतिभन्दा बाहिरको विषय भन्दै सो प्रस्तावमा छलफल हुन नसक्ने बताएका थिए। ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पनि उनका गतिविधि संघीयताविरोधी भएको लाग्ने गरेको थियो।
त्यसबेला ओलीले मुख्यमन्त्रीहरुसँगको छलफलमा प्रदेशहरु संघकै इकाइ भएको धारणा राखेपछि त्यसको आलोचना भएका थियो। संविधानले प्रदेशहरुलाई स्वतन्त्र इकाइको मान्यता दिएको छ।
त्यसैगरी, विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले संघीयता खारेजी र धर्मनिरेपेक्षताको विषयमा जनमतसंग्रहको प्रस्ताव अघि सारेकै समयमा ओलीनिकट अर्का नेता गोकुल बास्कोटाले पनि उस्तै धारणा राखेका थिए।
बास्कोटाले संघीयतामा जाँदा नेपालको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक र अन्य ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई नहेरिएको भन्दै बहसको माग गरेका थिए।
‘संघीयतामा कुनै देश किन गएरु हामीले आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक र अन्य ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हेरेनौँ। जनताको आमूल परिवर्तनको स्वप्नशील तागतभित्र यो एजेन्डा खुसुस्क घुसाइयो
बास्कोटाले लेखेका छन्, ‘नेपालमा भन्दा विदेशमा गोष्ठीहरुको बाढी आयो र हामी बगिरह्यौँ। धर्म, संस्कृति र राज्यबारे त छुट्टै बहस गर्नु पर्छ।ओलीसँग निकट केन्द्रीय सदस्य निरुदेवी पालले पनि संघीयता खारेजीको माग गर्दै समाजिक सञ्जालमा लेख्दै आएकी छन्।
तर, केन्द्रीय सदस्य डा. विजय सुब्बा भने संविधानमा रहेको प्रावधानसँग बाझिने विषय एमालेको मुद्दा हुन नसक्ने बताउँछन्। संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको विरोध गर्नु प्रतिगामी कदम हुने उनको धारणा छ।
‘जसले जहाँ उठाए पनि यी बेठिक कुरा हुन्। त्यस्तो अस्थिर र अराजनीतिक कुरा हामी कसैले पनि गर्नु हुँदैन,’ सुब्बाले नेपालखबरसँग भने, ‘संविधानको खिलाफमा रहेको विषय एमालेको एजेन्डा बन्नु हुँदैन र बन्न पनि सक्दैन। – प्रहार न्युज
२०७८ श्रावण २८, बिहीबार २२:५८ गते 1 Minute 146 Views